पब्लिक क्याम्पसका समस्या र समाधानहरु – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पब्लिक क्याम्पसका समस्या र समाधानहरु
२०७१ फाल्गुन ६, बुधबार ०४:०४ गते
देशकै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्गीकरणमा दुई किसिमका शैक्षिक संस्थाहरु उल्लेखित गरिएको छ । एक त्रिविकै आंगिक क्याम्पसहरु र दोस्रो निजी अर्थात् प्राइभेट क्याम्पसहरु । आंगिक क्याम्पसहरुको सम्पूर्ण स्वामित्व त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल सरकारले लिएको हुन्छ भने निजी क्याम्पसहरुको स्वामित्व निजी व्यक्ति वा संस्थाहरुले लिएका हुन्छन् । तर, हाम्रो देशमा त्रिविको वर्गीकरणभन्दा फरक अवस्थामा रहेका क्याम्पसहरु देशैभरि सयौँको संख्यामा सञ्चालित छन् । यस्ता संस्थालाई ‘पब्लिक क्याम्पस’ भनेर चिनिन्छ ।
वास्तवमा पब्लिक क्याम्पसको स्वामित्व न त विश्वविद्यालयले लिएको हुन्छ, न त सरकारले नै । यिनीहरुको रेखदेख तथा सञ्चालन समाज, सामाजिक संस्था तथा राजनीतिक पार्टीको निर्देशनमा चलेको हुन्छ । वास्तवमा पब्लिकद्वारा सञ्चालित नितान्त शैक्षिक सेवाको भावनाले सृजना भएका क्याम्पसहरुलाई पब्लिक क्याम्पस भनेर चिनिन्छ । यस्ता क्याम्पसहरु हाम्रो देशभरमा छ सयभन्दा बढी रहेको पाइन्छ र यिनीहरुले देशको उच्च शिक्षाको विकासमा राज्यले गर्न नसकेको योगदान दिएका छन् । तीमध्ये कयौँ पब्लिक क्याम्पसहरु आर्थिक रुपले सबल र सक्षम छन् अनि सफलताका अन्तर्राट्रिय सूचकांकहरु आईएसओ, क्यूएए प्राप्त गरिसकेका छन् । यस्ता क्याम्पसहरु सरकारद्वारा सञ्चालित क्याम्पसहरु भन्दा भौतिक, शैक्षिक तथा विद्यार्थी संख्यामा उच्च स्थानमा रहेको पाइन्छ ।
तर, वर्तमान समयमा पब्लिक क्याम्पसहरुमा अनेकन समस्याहरु देखा पर्न थालेको छ । आर्थिक, भौतिक तथा राजनीतिक समस्याहरुले गर्दा जनताद्वारा सञ्चालित पब्लिक क्याम्पसहरु दिनानुदिन असफलताको मार्गतिर बढिरहेको छ । पब्लिक क्याम्पसहरुले भोग्नु परेको प्रमुख समस्याहरु यस प्रकार छन् ः–
क) स्वामित्व ग्रहण ः
पब्लिक क्याम्पस न त विश्वविद्यालय, न त सरकार अनि न त कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हुन्छ । यस्ता क्याम्पसहरुको संरक्षक को हो ? अभिभावक को हो ? यस्ता क्याम्पसहरुको आर्थिक दायित्व कसको अधीनमा हुन्छ ? यस्ता कैयन प्रश्नहरु पब्लिक क्याम्पसहरुप्रति सधैँ ठडिरहन्छन् । वास्तवमा यस्ता क्याम्पसहरु संरक्षकबिनाका टुहुरा भएका छन् । आर्थिक तथा भौतिक रुपले सफल हुँदै गए सबै राजनीतिक पार्टीहरु र तिनीहरुका भातृ संगठनहरु लुछाचुँडी गर्न तम्सन्छन् र सम्पूर्ण संस्थाकै मालिक जसरी प्रस्तुत हुन्छन् । तर, असफल हुन थालेपछि ती राजनीतिक दलहरु र उनीहरुका भातृ संगठनहरु हाम्रो मात्रै हो र ? राज्यले हेर्नुपर्छ भन्नेजस्ता प्रश्नहरु उठाउँदै देखा पर्न छोड्छन् । पब्लिक क्याम्पसहरु नेताहरुका लागि जर्सी गाईजस्ता भएका छन्, दुधालु हुउन्जेल मालिक बन्ने अनि बूढी र थारो हुन थालेपछि बगरमा छाडिदिने । यसरी स्वामित्व ग्रहण गर्ने स्थिर शक्तिको अभावले पब्लिक क्याम्पसको जग दह्रो हुन सकेको छैन ।
ख) राजनीतिक क्रीडास्थल ः
विगतलाई हेर्ने हो भने त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरु राजनीतिक खेलले मसानघाटसम्म पुग्ने तर्खरमा थिए । तर, ६२–६३ को जनआन्दोलनपछि ती क्याम्पसहरुमा राजनीतिक गन्धा खेल कम हुँदै गएको देखिन्छ । कुनै पनि विद्यार्थी संगठनहरुले यस्ता क्याम्पसमा अनेकन माग राखी बन्द, हड्ताल गरे पनि उक्त समस्याहरु माथिल्लो निकायबाटै समाधान हुने र शिक्षक–कर्मचारीको तलबमा कुनै प्रभाव नपर्ने हुँदा बन्द, हड्तालका कार्यक्रम कम भएका छन् । अर्कोतर्फ निजी क्याम्पसका सञ्चालकहरुले राजनीतिलाई क्याम्पसको गेटबाट छिर्नै दिँदैनन् । उनीहरुले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरी आफ्ना संस्थाहरुलाई बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी र राजनीतिबाट टाढै राख्न सफल भएका छन् ।
तर, बिचरा पब्लिक क्याम्पसहरु राजनीतिक रंगमञ्च नै बन्न पुगेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरुको चिया–चौतारी र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका छन् । पब्लिक क्याम्पसको सर्वोच्च निकाय भनेर चिनिने सञ्चालक समिति राजनीतिक भागबन्डामा निर्माण हुन्छ । प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, प्राध्यापक–कर्मचारी नियुक्ति अमूक पार्टीले डामेकै आधारमा हुन्छ । अझ बढुवा गर्दा, उच्च तहका पदहरु प्राध्यापक, रिडर, प्रशासक, प्रोफेसर आदि औँठाछाप सञ्चालक समितिले दलेको रातो पाउडरको भरमा निर्धारण हुने गर्दछ । यसरी माउ नेता सञ्चालक र दुहुना गाई प्राध्यापक भएपछि उनीहरुका लोर्के साँढहरुले मच्चाउने वितन्डाले पब्लिक क्याम्पसहरु बिरामी पर्न थालेका छन् । तालाबन्दी, हड्ताल, राजनीतिक कार्यक्रम, झडप, नाराबाजी इत्यादि पब्लिक क्याम्पसका विशेषता नै भएका छन् । यसरी पब्लिक क्याम्पसहरु राजनीतिक सिकार बनेका छन् । यसले गर्दा शैक्षिक गतिविधि ध्वस्त हुन पुगेको छ ।
ग) पुराना शैक्षिक कार्यक्रम र कमजोर पूर्वाधारहरु ः
अधिकांश पब्लिक क्याम्पसहरुमा पुरानै शैक्षिक कार्यक्रमहरु जस्तै शिक्षा, मानविकी अनि व्यवस्थापनकै पुराना विषयहरु सञ्चालन भएका छन् । उनीहरुसँग आधुनिक जीवन उपयोगी व्यावहारिक तथा टेक्निकल कार्यक्रम पनि छैन । उही पुराना शिक्षक–कर्मचारीका भरमा सञ्चालित आउट डेटेड शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको संख्या निकै कम भएको छ । आजका विद्यार्थीहरु मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, बीबीए, बीसीए तथा कम्प्युटरका अनेकन नवीन कार्यक्रम खोज्दै राजधानी तथा विदेश भौँतारिरहेका छन् भने पब्लिक क्याम्पसहरु बेरोजगार सृजना गर्ने भुसेबालीको खेती गरिरहेका छन् ।
यसैगरी आधुनिक उच्च शिक्षालयहरुमा भौतिक पूर्वाधारहरुको सहज र सफल पहुँच हुनुपर्दछ । उच्चस्तरीय मापदण्डभित्र पर्ने कक्षा कोठाहरु, पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन, आधुनिक प्रविधियुक्त ल्यावहरु, खेलकुद मैदान तथा यातायातको राम्रो प्रबन्ध हुनु अनिवार्य पर्दछ । तर, अधिकांश पब्लिक क्याम्पसहरु दान दातव्य तथा कृपाका भरमा चलेकाले भौतिक पूर्वाधारको आधार नै देखिँदैन । अझ कतिपय यस्ता क्याम्पसहरु साना स्कुलका कक्षा कोठामा सञ्चालन भएकाले पब्लिक क्याम्पसहरुको क्रेज घट्दै गैरहेको छ ।
घ) अपारदर्शी क्याम्पस सञ्चालन नियमावली ः
कुनै पनि सफल शैक्षिक संस्था बन्न त्यस संस्थाले लिएको निष्पक्ष, पारदर्शी र सकारात्मक नीति–नियममा नै भर पर्दछ । तर, पब्लिक क्याम्पसहरुले निर्माण गरेका निती–नियमहरु अपारदर्शी, पक्षपाती तथा पार्टीकेन्द्रित हुने गर्दछन् । जुन पार्टीको सञ्चालक समिति बन्यो, त्यही पार्टी सुहाउँदो क्याम्पस सञ्चालन नियमावली बनाई राख्ने परिपाटीले गर्दा राजनीतिक पहुँचका भरमा असक्षम, अयोग्य व्यक्तिहरु स्थायी हुने, क्याम्पसप्रमुख तथा सहायक क्याम्पसप्रमुख हुने गर्दछन् । यसले गर्दा सक्षम तथा योग्य शिक्षक, कर्मचारीहरु पलायन हुने हुँदा पब्लिक क्याम्पसको शैक्षिक नतिजा दिनानुदिन खस्कँदै गैरहेको छ । अर्कोतर्फ, पार्टीलाई रिझाएर स्थायी हुने र संस्थालाई कंगाल हुनेगरी तलबका अलावा अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिने नीति–नियमले गर्दा पब्लिक क्याम्पसहरु कंगाल भैरहेका छन् भने पहुँचवाला स्थायी शिक्षक, कर्मचारीहरु मोटाउँदै गैरहेका छन् ।
सत्यता यही नै हो, पब्लिक क्ब्याम्पसहरु भनेका बगरमा उम्रिएका च्याउजस्ता भएका छन् । तिनीहरुका न त संरक्षक नै छन्, न त कसैले माया नै गर्दछन् । तर, पब्लिक क्याम्पसहरुले गरेको शैक्षिक योगदानलाई कदर गर्ने हो भने माथि उल्लेखित समस्याहरु समाधान गर्नुपर्दछ । यसलाई अभिभावकत्व दिन सम्पूर्ण पब्लिक क्याम्पसहरुलाई गोलबन्द गर्न पब्लिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी राज्यले आर्थिक तथा भौतिक दायित्व वहन गर्नुपर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरुले पब्लिक क्याम्पसहरुलाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ र प्रजातान्त्रिक अनि योग्य नागरिक सृजना गर्न, पवित्र शैक्षिक मन्दिर निर्माण गर्न आफ्ना राजनीतिकर्मीहरुलाई लगाम लगाउनुपर्दछ । शिक्षक, कर्मचारीहरु ‘हाम्रो भन्दा पनि राम्रो’ छान्नुपर्दछ । राजनीतिक डामका भरमा टपरटुइयाँ व्यक्तिहरुलाई स्थायी बनाएर संस्थाहरु नै सिध्याउने गरी यो या त्यो शीर्षकमा आर्थिक घोटाला गर्ने नियमावली हटाउनुपर्दछ । अनुभवी, सक्षम र योग्य व्यक्तिहरुलाई मापदण्ड बनाई क्याम्पसप्रमुख तथा अन्य प्रशासनिक पदमा नियुक्ति दिने परिपाटी हरेक पब्लिक क्याम्पसले गर्नुपर्दछ ।
यसरी राज्य, राजनीतिक दल, समाज तथा पब्लिक क्याम्पसलाई कर्मथलो बनाएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरु एक विचारका साथ पब्लिक क्याम्पसलाई शुद्ध दिलका साथ सेवा गर्ने हो भने पब्लिक क्याम्पसहरुले उच्च शिक्षामा आफ्नो पहिचान बनाइरहन सक्छन् । तर, हालकै परिपाटीमा यस्ता संस्थाहरु गुडिरहे चाँडै नै दुर्घटना हुने छ र पब्लिक क्याम्पसहरु पब्लिक गेस्ट हाउस बन्न धेरै बेर लाग्ने छैन ।